काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही असार ५ देखि गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
आफूलाई सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेताको रुपमा व्यख्या गर्दै आएका प्रम ओलीले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराएका जहाज नचढी तिब्बती सरकारको लगानी रहेको हिमालयन एयरबाट चीन जाने तयारी गरेका छन् । तिब्बती सरकारको लगानी रहेको हिमालयन एयरलाइन्समा ओलीका विश्वासपात्र व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको छ ।
एमाले पार्टी कार्यालय रहेको धुम्बाराहीको भवन पनि आङछिरिङले नै एमालेलाई दान दिएका हुन् । यसअघि चीन जाँदा पनि ओलीले हिमालयन एयरलाइन्स नै प्रयाग गरेका थिए । हुन त ओलीले भारत भ्रमणमा पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवालाई उपेक्षा गर्दै हिमालयन एयरलाइन्सलाई नै प्रयोग गर्न चाहेका थिए ।
तर, भारतीय पक्षले हिमालयन एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति नदिएपछि ओली नेपाल एयरलाइन्स प्रयोग गर्न बाध्य भए । भारत सरकारले तिब्बती एयरलाइन्सलाई भारतमा उडान अनुमति नभएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि ओली बाध्य भएर नेपाली झण्डा फहराएको नेपाल वायुसेवा निगम चढ्न बाध्य भएका थिए ।
नेपाली झण्डा फहराएको जहाज नचढ्ने प्रम ओली चिनियाँ प्रम ली खटियाङको निमन्त्रणमा पाँच दिने औपचािरक भ्रमणका लागि चीन जाँदैछन् । भ्रमणका क्रममा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेट गर्ने चर्चा चले पनि भेट निश्चित भइसकेको छैन ।
सूत्रका अनुसार ओली र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भेटवार्ता हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । ओलीसँगको भेटलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्राथमिकतामा नराखेको स्रोतले बतायो । भ्रमणका क्रममा प्रम ओलीले समकक्षी खछियाङसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा व्यापार समूह, बेइजिङस्थित थिंक ट्ंयाक लगायतमा छलफल हुनेछ ।
भ्रमणमा ओलीले चीनसँगका १० बुँदे सहमति गर्ने भएका छन् । ओलीको चीन भ्रमणमा पहिलेका सहमति कार्यान्वयन एवं क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले प्राथमिकता दिइनेछ । भारतसँगको निर्भरता कम गर्न ओलीले चीनसँग पनि यातायात र पारवाहन सन्धी गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रमको भ्रमण दलमा प्रमपत्नी राधिका शाक्यका अतिरिक्त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइउमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रमका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसद, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डल र सञ्चारकर्मी सहभागी हुने भएका छन् ।
ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणमा चीनसँग पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पनि पहिल्याउने प्रमको तयारी छ ।
ट्रान्स हिमालयन नेटवर्क अन्तर्गत रेलवे, सडक मार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र यातायात तथा पारवाहनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सहमति गरिने बताइएको छ । हिमालयन एयरलाइन्सको विमानबाट चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रम ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका साथै त्यहाँका शीर्ष नेतासँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भने ७ असारमा हुने भएको छ ।
प्रमले चिनियाँ राष्ट्रपति सि, प्रम ली खछियाङलगायत नेतासँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने छन् । सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रबर्धन गर्न प्रम ओलीको उपस्थितिमा नेपाली दूतावासले बेइजिङमै मैत्रीपूर्ण दौड आयोजना गर्ने भएको छ ।
भ्रमणमा निजी क्षेत्रबीच कृषि, ऊर्जा, बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवान प्रान्तको एससीआईजी कम्पनीबीच मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने क्यास्केट आयोजनाअन्तर्गत दुई आयोजनाबाट कुल एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि प्रमले राखेका छन् ।
आगामी भदौ १४ र १५ गते बहुपक्षीय विमस्टेक सम्मेलन नेपालमा आयोजन ागर्ने विषयमा पनि चीन सरकारसँग छलफल हुनेछ । विराटनगर स्थित भारतका फिल्ड अफिस हट्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक मामिला विभाग (डीपीए) बन्द गर्ने निर्णय सरकार उपलब्धि भएको ब्रिफिङ प्रमले चीन सरकारसमक्ष गर्नेछन् । ओलीले विराटनगरस्थित भारतको फिल्ड अफिस हटाउनुलाई पनि ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् ।
नियुक्तिलाई लिएर ओली र दाहालबीच द्वन्द्व
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । देशको एक मात्र इन्धन आपूर्तिकर्ता निगममा ओली र दाहालको द्वन्द्वले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा हुने कमिसनको खेल पनि उजागर भएको छ ।
विगतदेखि निगममा रहेको भ्रष्टाचारको रोगले जनता आक्रान्त बन्दासमेत सरकार र विभागीय मन्त्रीले यसलाई तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने माध्यमका रुपमा लिइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशक पद नै कमाउने मुख्य माध्यम बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार पाएको निगमले गरेको मूल्यबृद्धिले सर्वसाधारणको चुलो नबलने अवस्था आएको छ ।
तर, आपूर्ति मन्त्रालयले भने एक जना निगमको कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्न समेत करोडौं कमिसनको बार्गेनिङ सुरु भएको छ । यसअघिका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पदबाट राजीनामा दिएपछि आपूर्तिले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने जनाएको थियो ।
तर, मन्त्रालय र मन्त्रीले यो पद बिक्रीमा राखेपछि अहिले एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति रकम बढाबढ गर्दै पतिष्पर्धामा आएका छन् । निजामती क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सुनको अण्डाका रुपमा हेरिएको निगमको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त हुने सम्भावना पनि टाढै गएको छ ।
निगममा कार्यकारी निर्देशक पद पाउनका लागि १२ देखि २५ करोडसम्मका प्रस्ताव आउन थालेका छन् । निगमको कार्यकारी निर्देशक हुन रकममात्र नभई ठूलो नेताको आर्शिवादसमेत पाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
निगमस्रोतका अनुसार अहिले निगमको कार्यकारी निर्देशशकका लागि साम, दाम र फूलपाती बोकेर शीर्ष नेता कहाँ धाउनेको लर्को बढ्दै गएको छ । दौडमा रहेका कतिपय त भेटीको सूचना पाउनेबित्तिकै घर फर्कनसमेत थालेका छन् ।
निगमको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि अहिले सुरेन्द्र पौडेल, मुकुन्द घिमिरे, नन्दकिशोर रौनियार र सञ्जय साह दौडमा रहेका छन् । तर, उनीहरुमध्ये दुईको सम्भावना प्रवल देखिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी निगमकै निमित कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको पल्लाभारी छ तर उनको पनि निश्चित छैन ।
खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट लिने भएकाले परिक्षा पनि उनीहरुको थैलो कति कसिलो हुन्छ । त्यसैमा निर्भर हुने निगम स्रोत बताउँछ । आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले भने तराई मूलका सबैलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ ।
तर, मन्त्री यादव विभागीय मन्त्री भए पनि अन्तिममा पूर्व एमालेका व्यक्तिलाई दिने तयारी गरिएको बताइन्छ । अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेललाई तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।
उनी सुनसरी महेन्द्रनगर गाविसका स्थायीवासी हुन् भने घिमिरे निगमका निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । घिमिरेलाई पनि निगमका विषयमा धेरै जानकारी छ ।
अर्का प्रतिष्पर्धी रौनियार पनि निगमकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने साह नोपल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको हवाइ विभागमा कार्यरत रहँदा विवादित व्यक्ति हुन् । उनीहरु राजनीतिक लबिङ जुटाउन प्रम ओली, नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई भेटिरहेका छन् ।
तर, मन्त्री यादवले यो दौडको स्वाद चाख्न पाउने अवस्था देखिएको छ । अहिले प्रतिष्पर्धामा रहेका व्यक्तिबाट निगमको कार्यकारी निर्देशक भएमा उदयपुर सिमेन्टका पौडेल निगमको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्छन् । पौडेल प्रम ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् ।
पौडेलपछि निगमकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिमिरे आउन सक्ने सम्भावना छ । घिमिरे पूर्व माकेनिकट हुन् र उनलाई नेकपाका अध्यक्ष दाहालको आर्शिवाद छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
निगम कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रम ओली र सोही दलका अर्को अध्यक्ष दाहालबीच प्रतिष्ठानको लडाइ सुरु हुनुले पनि निगमको कमिसन काण्ड उजागर हुँदै गएको छ । ओलीले पौडेल र दाहालले घिमिरेलाई नछाड्ने भएपछि दुई नेताबीच चिसोपन सुरु भएको हो ।
सत्यनिरुपण तथा व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगबाट काम सम्पन्न नभएको देख्दा मलाई आश्चर्य र दुःख लागेको छ : नेता रावल (भिडियो सहित)
आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै कामना सेवा विकास बैंक, लघुवित्त संंस्थाहरुमा जोखिम कम
‘विप्लव’ माओवादीले मंसिर ८ गते गर्ने जनसभाको तयारी पुरा,‘‘(नेकपा) र काँग्रेसलाई निम्तो छैन्’’
नेकपाको पूर्ण एकता अल्मलियो , ओली गुटको चर्को आलोचना !
क-कसको हुँदैछ नेकपामा बढुवा ? बालुवाटार नै हल्लाउने कुन चिठी हो त्यो ?
जटिल बन्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस : अबको प्रधानन्यायाधीश को ?
सन्दर्भः विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष : ‘द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति’
देउवाको प्रश्न : ‘कुन घरमा झगडा छैन ? पार्टीमा पनि हुन्छ’